‘ဂျပန် တို့ဟူးကင်’ | Wutyee Food House
« ထိုင်းစတိုင် ပြည်ကြီငါးသုတ်
KFC ကြက်ကြော် »
September 19, 2011 by chowutyee ‘ဂျပန် တို့ဟူးကင်’
လီမွန်ရည် [orange juice] ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၈ဇွန်း
ပဲငံပြာရည်အကြည် [light soysauce] ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၆ဇွန်း
သကြား [sugar] ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၅ဇွန်း
နှမ်းဆီ [sesaem oil] ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
ကြက်သွန်ဖြူ [garlic] ♦ ၂မွှာ (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပေးပါ)
ဂျင်း [ginger] ♦ ၂ပြား (မထူမပါးလေး လှီးပေးပါ)
ချက်ပြုတ်နည်း [Cooking Recipes]
၁။ အရင်ဆုံး လုပ်ရမှာက တို့ဟူးလေးတွေကို လက်မ၀က်ထက် အနည်းငယ်ပါးပြီ လှီးပေးပါ။
၂။ ပြီးမှ တို့ဟူးများကို တ၀က်ပြန်ဝက်ပေးပြီ ပန်းကန်လုံးတစ်ခုထဲ ထည့်ထားပေးပါ။
၃။ တို့ဟူးကို နုပ်ထားရန် ဆော့ကို စလုပ်ပါမည်။ ဆော့အတွက် ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သော (လီမွန်ရည်၊ ပဲငံပြာရည်၊ သကြား၊ နှမ်းဆီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း၊ နတ်နတ်ပွင့်) တို့အားလုံးကို ခွက်တစ်ခုထဲသို့ ရောထည့်လိုက်ပါ။
၄။ ပြီးနောက် ဆော့ထည့်ထားသော ခွက်အတွင်းကို မွှေတံဖြင့် သမအောင် (သကြားများ ပျော်အောင်) အထိ မွှေပေးပါ။
၅။ ဆော့ရပြီဆိုလျှင် တို့ဟူးပန်းကန်ထဲသို့ ဆော့ရည်များကို လောင်းထည့်ပေးပြီ ၁နာရီခန့် ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် နုပ်ထားပေးပါ။
၆။ တို့ဟူးကင်ရာတွင် မီးသွေး၊ ဂက်(စ်)၊ လျှပ်စစ်မီးဖို ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ရ။ စကင်တော့မည် ဆိုလျှင် နုပ်ထားသော တို့ဟူးတစ်ခုကို ၀ါးတံစို့ နှစ်ခုထည့်ပြီ ကင်ရန် စီထားပေးပါ။
၈။ ပြီမှ ခွက်ထဲမှ ဆော့ရည်များကို ဒယ်ထဲထည့်၍ အပူပေးပြီ ပူလာလျှင် ကော်ရည်များကို လောင်းထည့်ကာ ခွက်တစ်ခုထဲ ပြန်ထည့်ထားပါ။
၉။ ကင်မည့် အပြားကို ဆီအနည်းငယ် သုတ်ပေးပါ။ ပြီလျှင် တို့ဟူးများကို စကင်လို့ရပါပြီ။
၁၀။ ကင်နေစဉ် အတွင်း တို့ဟူးမျက်နှာပြင်များကို ချက်ထားသော ဆော့ရည်များကို သုတ်ပေးပါက ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
၁၁။ အညှိရောင်သန်းလာသည်အထိ ၂မိနစ်ခြားတစ်ခါလောက် လှည့်လှည့်ပေးပါ။
၁၂။ တို့ဟူးကင်များ ရပြီ ဆိုလျှင် ဆော့ရည်အနည်းငယ် သုတ်ပေးပြီ အပေါ်မှ နှမ်းလေးများ ဖြူး၍ အရသာရှိစွာ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ….
Tip: ကျန်သည့် တို့ဟူးဆော့ရည်ကို ဆော့အဖြစ် တွဲစားပါက ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
Posted in ဂျပန်စတိုင် ချက်ပြုတ်နည်း | 8 Comments	8 Responses
on September 19, 2011 at 9:01 am | Reply Cho Wut Hmone
share bar lar…new thing lay…like tal…treat me hee
on October 1, 2011 at 11:10 am | Reply chowutyee
haaa ကျွေးပါတယ် ငါအမွှာလေးကို..😛
on September 19, 2011 at 12:48 pm | Reply မြတ်
အထူးအဆန်းလေးမို့ လုပ်စားဖို့ကြိုးစားလိုက်အုံးမယ်နော် ၊
on October 1, 2011 at 11:11 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ လုပ်စားကြည့်ပါ မမြတ်..🙂
on October 2, 2011 at 9:46 am | Reply shinlay
တို့ ဟူးဆိုကြိုက်ပါတယ်။ လုပ်စားကြည့်ပါမယ်။
on October 3, 2011 at 6:42 am | Reply chowutyee
on March 30, 2012 at 3:20 am | Reply darlay
ဝတ်ရည် ! ဂျပန်တို့ဖူးကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဟင်. ပဲပြားကိုပြောတာလား
on March 30, 2012 at 10:40 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ ဂျပန်ပဲပြားပါ။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်ပဲပြားက ပိုနူးညံ့ပြီ စားလို့ကောင်းတယ်.. CityMart မှာ လေးထောင့်တုံး ဂျပန်ပဲပြားလို့ မေးပြီဝယ်လို့ရပါတယ်..😀